Calaamadahan waxey muujinaayan marxalada kala guurka. | alcarabiya.com
Home » Talooyin Jaceyl » Calaamadahan waxey muujinaayan marxalada kala guurka.
Calaamadahan waxey muujinaayan marxalada kala guurka.	Mararka qaarkood xiriirada waa kuwa sida degdeg ah ku bilowda,laakin qaarkood si dhaqsi leh. Ayaa wax u dhacaan.Kadib waxaa dila qaladaadka xiriirkaas ka dhasha, arimo ayaa dareentaa iney is bedeleen.
Wax uun ayaad dareentaa inaaney dabiici ahey,hadii arimahaas ay sii jiraana waxey u badan tahay jiritaanka xiriirkaasi inuu eber ku dhamaado.
Halkan waxaan kugu soo bandhigeynaa waxyaabo ka mid ah.
Waxaad tahay marwalbo kan waca,bilaabanaya fariimaha mobileka.
Hadii aad dareento in qiimo xagiisa/geeda aad ka laheyn
Hadii midkiin uu jecel yahay inuu kal kale caburiyo ama ku amar taagleeyo. Ama ismari waagiina uu badan yahay.
Markaad kulantaa waa yar yahay wada sheekeysigiina,wuxuuna la mid yahay sida adinkoo film wada fiirsanaayo,mana jirto xamaasad wada sheekeysi.
Waxaad dareentaa raaxo marka uu baaqdo qorshayaal aad wada laheydeen.	Waqtiyada balamada kuma fiicna,marwalbana ma dhamaado cudurdaar.
Marka aad qiyaaseysid mustaqbalkaaga,waxyaabaha ahmiyada kuu leh kuguma jiro qofkaas.
Waxaad ka doorbidaa la kulanka qofkaas inaad waqti badan saaxiibadaa la qaadato,si aad u kala fogaatiin.
Waxaad marwalbo ku riyootaa in qofkale aad tijaabijo wada socodkiisa/keeda.
Hadii qof idinka mid ah uu qiyaano wado ama uu keligiis dhisanaayo himilooyin aadan adiga ka dhex muuqanin.
One Response to Calaamadahan waxey muujinaayan marxalada kala guurka.	Dahabo cadey Reply
October 9, 2013 at 5:40 pm	Waa been cad waxajira midlamaad hana waalina kafiirsha rariimo jaceel